Ungaziguqula kanjani futhi uzisebenzise kahle izinhlelo eziqala ngeseshini yami Kusuka kuLinux
Ungaziguqula kanjani futhi uzisebenzise kahle izinhlelo eziqala ngeseshini yami
Izinsizakalo izinhlelo ezilayishwa kwimemori futhi zisebenza ngaphandle kokuthi sizibone. Ezinye zazo, kanye nezinhlelo ezithile, zenziwa lapho uhlelo lokusebenza luqala, ngaphambi kokuthi abasebenzisi bangene ngemvume. Kepha, akuzona zonke ezidingekayo noma ezingalingani izidingo zabo bonke abasebenzisi.
Ukubona uhlu lwezinsiza nezinhlelo zokusebenza ezisebenza lapho kuqala Ubuntu, Iya ku:
Uhlelo> Okuncamelayo> Izicelo ekuqaleni
Uma usufikile, kufanele bavale kuphela izinsizakalo nezinhlelo abangazisebenzisi. Mina, ngokwesibonelo, ngikhubaze i- "Remote Desktop", "iBluetooth Manager", "Visual Assistance", "Gnome Login Sound", "Evolution Alarm Notifier", njalo njalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungaziguqula kanjani futhi uzisebenzise kahle izinhlelo eziqala ngeseshini yami
Kepha amadimoni awaphumi u-U_U
Bheka, anginabo Ubuntu obufakiwe ukukuqondisa igxathu negxathu.
Kodwa-ke, ngibala ukuthi uma uvula iDash (okungukuthi, uma uchofoza inkinobho enophawu lwe-Ubuntu oluvela phezulu kwakho konke kubha yesobunxele) bese ubhala "izinhlelo zokusebenza" noma "qala" noma into efanayo , inketho efanele kufanele ivele.
Angikwazi ukuthola lezi zinketho ku-Ubuntu12.10 ..
Uyini umehluko phakathi kwesoftware "yamahhala" nesoftware "yamahhala"?
Iphepha elimhlophe: "amakhasi aphuzi" wesoftware yamahhala